AllCiyaartoyda Kubadda Cagta BelgiumCiyaartoyda Kubadda Cagta ee CroatianCiyaartoyda Kubadda Cagta DenmarkCiyaartoyda Kubadda Cagta HollandCiyaartoyda Kubadda Cagta FaransiiskaCiyaartoyda Kubadda Cagta JarmalkaCiyaartoyda Kubadda Cagta TalyaanigaCiyaartoyda Kubadda Cagta ee BoortaqiiskaCiyaartoyda Kubadda Cagta SpainCiyaartoyda Kubadda Cagta Switzerland
Home SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA Ciyaartoyda Kubbadda Cagta Columbian Sheekada Carruurnimada Duvan Zapata Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Laga bilaabo, naaneysigiisa waa “The Big Panther". Waxaan ku siinaynaa dabool buuxa oo ah sheekada Carruurnimada Duvan Zapata, Taariikh nololeedkiisa, Xaqiiqda Qoyska, Waalidiinta, Nolosha Hore iyo dhacdooyin kale oo caan ah laga soo bilaabo markii uu cunugga ahaa ilaa markii uu caan noqday.
Nolosha iyo koritaanka Duvan Zapata. Dhibcaha Sawirka: Semana iyo Hadafka.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay Zapata xawaaraha, jirkiisa iyo indhihiisa weyn ee gooldhalinta. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa tixgeliya nooca noo ah Duvan Zapata's Biography oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Taariikhda Carruurnimada Duvan Zapata- Hore iyo Taariikhda Qoyska
Si aad uga bilowdid, Duván Esteban Zapata Banguero wuxuu ku dhashay maalintii koowaad ee 1-dii Abriil 1991 rugta caafimaad ee Rafael Uribe Uribe ee ku taal Cali, Kolombiya. Waa kan labaad ee laba carruur ah oo ay ugu dhalatay hooyadeed, Late Elfa Cely Banguero iyo aabihiis, Luis Oliver Zapata. Hoos waxaa ku yaal sawir dhif ah oo ah Duvan Zapata waalidkiisa jecel.
La kulan waalidiinta Duvan Zapata- hooyadiis, Late Elfa Cely Banguero iyo aabihiis, Luis Oliver Zapata. Dhibcaha Sawirka: Semana.
Aasaaska Qoyska Duvan Zapata: Ma ogeyd in sixirka kubada cagta uu yahay muwaadin Columbian ah oo qowmiyado isku dhafan oo asal ahaan kasoo jeeda Qoyska Mareykanka? Xaqiiqdii, Duvan Zapata waalidkiis waxay ku soo koriyeen xaafadda Córdoba ee degmada Aguablanca, Cali halkaas oo uu ku soo koray isaga iyo walaashiisa ka weyn Cindy Carolina.
Duvan Zapata oo ah Sawir caruurnimo oo qurux badan- Waxa lagu soo barbaaray Cordoba oo ku taal Cali. Sawirka Sawirka: Semana.
Nolosha Hore ee Duvan Zapata: Markii uu ku barbaaray Córdoba, Duvan-yari Duvan wuxuu bilaabay kubbadda cagta waddada ciriiriga ah ee Cali halkaas oo gurigiisu ku yaal. Intii uu wiilka da'da yari jiray, waxa uu ku riyooday in uu noqdo ciyaartoy caan ah oo kubada cagta ah, oo aan u noqonin caan ama taajirnimo laakiin uu awoodo in uu awoodo in uu ku ciyaaro PlayStation!
Taariikhda Carruurnimada Duvan Zapata- Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Markii Duván uu 11 jirsaday, kartidiisa kubada cagta mar horeba way u caddaatay waalidkiis oo u arka inay ku habboon tahay in iskuulkiisii ​​caadiga ahaa ee Liceo Superior del Valle ee Ciudad Córdoba ay gacan ka geysan doonaan dhisida xirfad xirfadeed oo kubbadda cagta ah.
Markii uu ahaa 11, Duvan wuxuu hore u lahaa jimicsi isboorti wuxuuna diyaar u ahaa inuu bilaabo xirfad ku dhiska kubada cagta. Sawirka Sawirka: Semana.
Sidaas darteed, Duván fasalka lixaad ee fasalka 6aad kadib markuu dalbaday ogolaanshaha waalidkiis waxaa loo oggolaaday inuu iska diiwaangeliyo heerka carruurnimada ee naadiga deegaanka América de Cali sanadkii 2002. Intii uu ku sugnaa naadiga deegaanka, Duvan wuxuu ku koray xoog, xirfad iyo dhir sida uu hore u ahaa isagoo taagan 1.86m markii uu jiray 16 sano sanadkii 2007.
Taariikhda Carruurnimada Duvan Zapata- Nolosha Mudnaanta Hore
Markii ay aheyd América de Cali ayaa Duvan uu ka soo dhex muuqday safka hore, oo xirfad u soo noqday oo xitaa dhaliyay goolashiisa ugu horeeya ee uu ku farxay macalinkiisa Diego Umaña - kaasoo markii hore fursad u siinayay inuu tababar la qaato kooxda waa weyn ee kooxda. Duván wuxuu u ciyaaray América de Cali laba xilli ciyaareed oo dheeri ah (2009/2010 & 2010/2011) ka hor inta uusan amaah ugu ciyaarin kooxda reer Argentina - Estudiantes halkaasoo uu sidoo kale dhaliyay goolashiisii ​​ugu horeysay.
Ka soo saraynta darajooyinka: Miyaad ku arki kartaan kooxda keydka ee kooxda América de Cali? Sawirka Sawirka: Semana.
Dhacdooyinka kubbada cagta ayaa sii waday rikoodhka kororka goolasha ee goolasha laga dhaliyo inkasta oo mararka qaar uu la soo muuqday kooxda juunyeerka kooxda. Sidaas darteed, Estudiantes wuxuu iibsaday kala bar xuquuqdiisa ciyaarta América de Cali wax yar ka hor inta uusan bilaabin soo jiidashada xiisaha kooxaha waaweyn ee Yurub oo ay ku jirto West Ham oo ku dhaweyd inay la saxiixato laakiin way ka quusteen sababtoo ah ma aysan helin ogolaansho shaqo. Farxadda qoyska Duvan Zapata ma aysan xad lahayn waqtigaas naadiga reer Talyaani, Napoli waxay ka caawisay sugida fiisaha Talyaaniga si uu ugu ciyaaro iyaga.
Duvan Zapata Biography- Waddada loogu talagalay sheekada
Duvan oo ugu danbeyn ay iibsadeen kooxda reer Talyaani ee Napoli, ma uusan helin fursad fiican oo uu isku cadeeyo inkastoo uu ka mid ahaa saxiixyada ugu qaalisan waqtigaas. Xaqiiqdii, macalinka Napoli markaa Rafa Benitez inta badan wuxuu xusay in Duvan uu muhiim u ahaa kooxda laakiin gooldhaliyaha weerar la'aanta waqtiga ciyaarta ayaa cadeysay arintaas.
Kooxda Napoli ayaa ahayd meeshii ugu horraysay ee ay kala kulanto jahwareer kubbadda cagta. Sawirka Sawirka: Hadafka.
Markaa, layaab maleh Naples Duvan wuxuu amaah ugu siiyay Udinese halkaasoo uu ku qaatay qaab aan deganayn dhaawac dartiis. Midkoodna Duvan si cajiib ah amaah ugama helin Sampdoria halkaasoo uu weli ka ahaa sidii uu u fulin lahaa awooddiisa. Xaqiiqdii, Duvan wuxuu ka yeeray xulkii Colombia ee Koobka Aduunka 2018 laakiin ma uusan u yeerin xulkii ugu dambeeyay sababihi cad.
Duvan Zapata Biography- Kusoo sharax sheekada
Sida Phoenix ka soo kacda dambaska dambaska, Duvan wuxuu bilaabay inuu muujiyo awooddiisa buuxda ee Atlanta, koox uu ka iibiyey Sampdoria kadib markii kooxda reer Talyaani ay go’aansadeen in aan loo baahnayn.
Goolal uu dhaliyay goolal ka dib, Duvan wuxuu aasaasay inuu yahay gooldhaliyaha ugu sareeya Serie A si wada jir ah Cristiano Ronaldo xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay! Xitaa wuxuu ka caawiyay Atalanta inay gaarto Finalka Coppa Italia ee 2019 isla markaana ay ku gaarto kaalinta seddexaad ee Serie A. Inta soo hartay, waa sida ay yiraahdeen, waa taariikh.
Eeg cidda abaalmarinta la wadaageysa Christiano Ronaldo. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Duvan Zapata Xaaska iyo Caruurta
U guurista nolosha reerka ee Duvan Zapata, wuxuu guursanayaa gabadha uu saaxiibka la yahay - Nana Montaño waxayna leedahay waxyaabo badan oo wanaagsan oo ay ugu socdaan nolosheeda guurka. Lamaanahan ayaa ilaa iyo sanadkii 2012 ku wada kulmay Cali markii uu Duvan u ciyaarayay kooxda reer Argentina ee Estudiantes. Nana waxay ahayd arday jaamacadeed oo baraysay cilmu-nafsiga waqtigaas. Waxay taariikhaysnaa dhawr sano ka dib xiriirkoodana waxay u qaadeen heerka labaad iyagoo guursaday sannado kadib.
La kulan Naagta Duvan Zapata. Waxay isu eg yihiin kuwo isqanweeya, miyayna ahayn? Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Nana waxay ahayd naag sifiican u ogaatay sida ninkeeda loo sii haysto! Sidaas oo ay tahay, ma jiraan wax diiwaangelin ah oo ah Duvan inuu qabo saaxiibo kale inta lagu gudajiray taariikhda haweeneyda noqon doonta xaaskiisa. Labada qof ee isqaba ayaa ah waaliddiinta labo caruur ah oo aad u qurxoon waqtiga qoraalkan. Waxay ka mid yihiin Dantzel (gabar) iyo Dayton (wiil).
Sawirka Duvan Zapata oo ay la socdaan xaaskiisa iyo caruurtiisa Dantzel & Dayton. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Duvan Zapata Xaqiiqda Qoyska iyo Nolosha
Waa kuma Duvan Zapata oo aan reer lahayn oo muxuu noqon lahaa haddii waalidkiis iyo walaalihiis aysan isaga u jirin bilowgii? Waxaan kuu soo qaadaneynaa xaqiiqooyin ku saabsan xubnaha qoyska Duvan Zapata oo ka bilaabaya waalidkiis.
Ku saabsan Duvan Zapata aabihiis: Luis Oliver Zapata waa aabaha hal abuurka kubada cagta. Wuxuu ku dhashay Korintos, Columbia wuxuuna ku soo barbaaray Tetillo. Haa, Zapata wuxuu ahaa aabe jecel oo taageera, wuxuu si adag u sara mariyey Duvan inuu noqdo wiil addeecsan oo ixtiraam leh wuxuuna hubiyay inuu isku dheellitiro akadeemiyada iyo ciyaarista kubada cagta. Maxaa intaa ka badan? Luis waligiis ma seegin inuu Duvan qaato tababarka inta lagu gudajiray xirfadiisa ciyaareed. Luis wuxuu hadda door muhiim ah ka ciyaarayaa sidii uu wiilkiisa kaliya ugu xilsaaro baahida loo qabo in diiradda la saaro oo is-hoosaysiinta.
Muuqaal dhif ah oo ka kooban Luis oo ku raaxeysanaya fasax qaali ah oo fasax ah ayaa ka mid ah waxyaabihii uu ka qabtay shaqada wiilkiisa. Astaanta Sawirka: WTFoot.
Ku saabsan Duvan Zapata hooyadiis: Late Elfa Cely Banguero Duvan Zapata hooyadeed. Waxay ku dhalatay Padilla, Columbia waxayna sidoo kale ku soo barbaartey Tetillo halkaas oo ay kula kulantay aabaheed Duvan. Sida ninkeeda Luis, Elfa waxay door muhiim ah ka qaadatay koritaanka wiilkeeda kaliya. Xaqiiqdii, waxaa lagu qiimeeyaa inay qaadatay 11-sano jir Duvan oo loogu talagalay is-barbardhigga heerka caruurnimada ee kooxda maxalliga ah ee América de Cali. Nasiib darrose waligeed kuma noolaan inay ku raaxaysato midhihii foosha sida ay u dhacday oo ay u dhimatay Juun 2010. In kasta oo dhimashadeeda ay si qoto dheer u dareentay Duvan, wuxuu isu keenay waqti yar gudaheed wuxuuna qaatay go'aan ah inuu sharfo xusuusta hooyadiis. inaad diirada saarto kubada cagta.
La kulan hooyadeed Duvan Zapata: Iyadu waa sida kale oo kale: Xusuusta Elfa Cely Banguero weligeed waa lagu ixtiraami doonaa wadnaha wiilkeeda Duvan. Sawirka Sawirka: Semana.
Ku saabsan Duvan Zapata walaalaha: Ma ogtahay in Duvan uusan lahayn walaal laakiin ay walaashiis tahay walaalkiis ka weyn. Marwada oo loo aqoonsaday inay tahay Cindy Carolina waxay ku soo kortay Duvan waxayna had iyo jeer u dhowdahay noloshiisa hore ilaa maanta. Waxaa xiiso leh in la ogaado inay labaduba wadaagaan isla jacaylka ay u qabaan kubadda cagta oo ay khadadka isgaadhsiinta ka dhigaan kuwo furan iyada oo aan loo eegayn xaqiiqda inay fog yihiin.
La kulan Duvan Zapata Walaasha- Cindy Carolina. Labaduba wey isla koreen welina waxay wadaagaan xiriir dhow. Sawirka Sawirka: Semana.
Ku saabsan Duvan Zapata eheladiisa: Marka laga tago nolosha degdegga ah ee Duvan Zapata, wax badan lagama oga dhalashadiisa iyo xididdada qoyskiisa ee la xiriirta awooweyaashiisa iyo awoowayaashaa. Thanks to mid ka mid ah waalidiinta 'Duvan Zapata', wuxuu xiriir la leeyahay Cristian Zapata oo ah ina-adeerkiis. Cristian wuxuu u ciyaaraa kooxda Serie A ka dhisan ee Genoa, wax badan lagama garanayo adeeradiisa iyo eeddooyinkiisa halka abtiga, abtiga iyo ilma adeeraya aan wali la aqoonsan waqtiga la qorayo taariikh nololeedkan.
La kulan Duvan ina adeerkiis Cristian Zapata. Astaanta Sawirka: Wareejinta Suuqa.
Duvan Zapata Biography-Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha
Xaaladda Duvan Zapata madaama uu yahay weeraryahan muhiim ah waa la dhameystiray - xitaa xitaa wuu ka sii fiicnaa - shaqsiyad aad u weyn oo lagu qeexay astaamaha Aries Zodiac. Waa nin is-hoosaysiiya, firfircoon, jecel-jecel, adkeysi badan, himilo leh oo u furan muujinta xaqiiqooyinka ku saabsan xaqiiqadiisa gaarka ah iyo shaqsiyadiisa.
Mar alla markii uu weeraryahanku tababaro ama uusan ciyaarin kubbadda, wuxuu ku kacaa hawlo dhowr ah oo waqti dheeri ah loo qaatay sida danahiisa iyo hiwaayadaha uu leeyahay. Waxaa ka mid ah safarka, dabaasha, cayaaraha fiidiyowga iyo waqti fiican la qaataan qoyskiisa iyo asxaabtiisa.
Kumaa jeclaan shaqsi jecel-jecel? Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Duvan Zapata Biography- Xaqiiqooyinka hab nololeedka
Marka laga hadlayo sida Duvan Zapata uu u isticmaalo oo u isticmaalo lacagtiisa, wuxuu haystaa qiyaasti qiimahiisu yahay $ 1M waqtiga qorista. Inta badan hantida uu leeyahay weeraryahanka ayaa ah ilo ku saabsan mushaharka iyo mushaarka uu ka helo kubbadda cagta heerka sare ah halka taageerooyinkaasina ay qayb libaax leh ka qaataan hantidiisa sii kordheysa.
Sidaasi oo kale, weeraryahanku wuxuu awoodi karaa inuu ku noolaado nolol raaxo leh oo ay taageerayaasha iyo cadawga isaga ka masayraan. Caddaynta noloshiisa wanaagsan ee Duvan waxaa ka mid ah awoodiisa inuu wado gawaarida raaxada iyo sidoo kale ku noolaashada guryaha iyo abaaraha.
Daraasad dhow oo ku saabsan xawaaraha sare ee mitirka ayaa soo jeedinaysa Duvan cruised in Mini Cooper. La yaab malaha inanku wuxuu doonayey iskii. Astaanta Sawirka: WTFoot.
Duvan Zapata Biography- Xaqiiqda Aan La Sheegin
Si aad u soo duubto sheeko carruurnimadeena Duvan Zapata iyo taariikh nololeedkeena halkan wax yar oo caan ah ama xaqiiqooyin aan laga warqabin ah oo ku saabsan weeraryahanka.
Xaqiiqada 1: Burburinta Mushaarka: Sida waqtiga qoraalka, qandaraaska weeraryahanka ee Atlanta BC wuxuu u arkaa inuu helayo mushahar isku mid ah oo ah 4,680,000 euro sanadkiiba. Jeexitaanka mushaharka Duvan Zapata oo ah tirooyin qoto dheer, waxaan haynaa waxyaabaha soo socda:
SALARY EE YURO
KHUDBADDII SIYAASADDA POUND
DAQIIQADII $ 5,122,377 € 4,680,000 £ 3,970,867
MARKA LABAAD $ 394,029 € 360,000 £ 305,405
TODDOBAAD LABAAD $ 98,490 € 90,000 £ 76,351
MAALINTII $ 14,069 € 12,857 £ 10,908
SAACADIIBA $ 586 € 536 £ 455
DAQIIQADII $ 9.76 € 8.9 £ 7.58
LABAAD $ 0.16 € 0.15 £ 0.13
Halkan, waxaan ku kordhinaynaa mushaarka Duvan Zapata daqiiqaddiiba. Tani waa inta uu kasbaday tan iyo markii aad daawaneysay Boggan.
Haddii lambarka kore uusan sare u qaadin, waxay ka dhigan tahay inaad ka daawanayso a Bogga AMP. Hadda Riix HALKAN si loo arko dakhliga ku soo gala Zapata daqiiqaddii. Ma ogeyd?… Waxay celcelis ahaan ku qaadan doontaa shaqaalaha Yurub ugu yaraan 18.5 sanadood inay kasbadaan isla sidii The Big Panther wuxuu kasbadaa 1 bil.
Xaqiiqada # 2: Diinta: Sida laga soo xigtay warbixinnada, waxay u badan tahay in waaliddiinta Davan Zapata ay ku koreen isaga oo u hoggaansamaya caqiidada katooliga ah. Adiga, gooldhaliyaha, kuma weyn diin laakiin waxaa lagu arkay kaniisad katoolig ah (hoos ka eeg). Horumarkaani wuxuu deyn u siinayaa suurtagalnimada Duvan inuu noqdo Masiixi ama ku dhaqma Katoolig.
Divan Zapata's Diintiisa- Ma jirto wax diidi kara xaqiiqda ah inuu yahay mu’miniin. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Xaqiiqada # 3: Xaqiiqada Tattoo Tattoo Duvan Zapata: Like Donyell Malen, Samuel Chukwueze, Luis Muriel iyo Krzysztof Piatek, Duvan Zapata ma leh farshaxan jir ahaaneed waqtiga qorista kumana helin taageerayaasheeda tattoos isaga weli. Wuxu diiradda saarayaa sidii loo hagaajin lahaa jirkiisa, adkaysigiisa iyo suurtagalnimadiisa dherer ahaan sababayaal badan oo waxtar leh.
Sawir caddeyn ah inuusan lahayn tattoos waqtiga qorista. Astaanta Sawirka: WTfoot.
Xaqiiqada # 4: Duvan Zapata qiimeynta FIFA: Ma ogtahay in Duvan Zapata uu leeyahay qiimeyn guud oo FIFA ah oo ah 83 waqtiga qoraalka. In kasta oo qiimeyntani ay soo martay kor u dhac heer sare ah waqtiyadii ugu dambeeyay, ma jirto wax dafiraya xaqiiqda ah in qiimeynta 87 ay soo jiidasho u yeelan doonto kuwa jecel FIFA ee jeclaan lahaa koox isku-dhafan oo tayo sare leh.
Qiimayntu way kacdaa oo degdeg ayey u kacaysaa Sawirka Sawirka: SoFIFA.
Xaqiiqada # 5: Xayawaanka Duvan Zapata: Waxaa jira weeraryahano badan oo wax u leh xayawaannada guryaha ah gaar ahaan eeyaha, Duvan Zapata waa mid ka mid ah! Xaqiiqdii, eeygiisa wuxuu la mid yahay wax ku sii kordhinaya ehelkiisa sida muuqata oo ay ugu caddahay qaabkii uu ku soo bandhigo sawirrada qoyska.
Ma jeceshahay xayawaannada sida Duvan Zapata iyo qoyskiisa? Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Xaqiiqada # 6: Duvan Zapata Sigaar cabista iyo Xaqiiqda Cabitaanka: Duvan Zapata lama siin cabitaan adag, kumana arkin sigaar waqtiga sigaarka. Dhaqanka noocaas oo kale ah, Duvan wuxuu ku biirayaa horyaalnimada ciyaartooyda kubbadda cagta ee aan hilmaamin baahi loo qabo inay noolaadaan oo caafimaad qabaan.
Duvan Zapata Biography- Saldhigga Aqoonta ee Wiki
Qeybta ugu dambeysa ee Duvan Zapata Xaqiiqooyinka Taariikhda, waxaad arki doontaa saldhigga aqooneed ee Wiki. Waxaa lagu muujiyey hoosta, waxay kaa caawinaysaa inaad hesho macluumaadka ku saabsan weeraryahanku hab fudud oo fudud.
Magaca Duvan Zapata Duván Esteban Zapata Banguero
Taariikhda Dhalasho ee Duvan Zapata 1dii Abriil 1991
Davan Zapata Da'diisa 28 (Laga bilaabo Febraayo 2020)
Magaca Aabaha Duvan Zapata Luis Oliver Zapata
Magaca Duvan Zapata Elfa Cely Banguero (Late)
Dhererka Duvan Zapata 1.89 m (6 ft 2 gudaha)
Goobta dhalashada ee Duvan Zapata Padilla, Cauca, Kolombiya
Walaasha Duvan Zapata Cindy Carolina
Duvan Zapata Cousin Cristian Zapata
Divan Zapata Diintiisa Masiixiyadda (Catholism)
Xaaska Duvan Zapata Nana Montano
Carruurta Duvan Zapata Dantzel (gabadhiisa) iyo Dayton (wiilkiisa).
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada Taariikhda Caruurnimada Duvan Zapata Plus Xaqiiqda Bixinta Taariikh Nololeedka. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Xusuus-qorka Atalanta BC
Napoli Taariikhda Kubada Cagta
Sheekada Carruurnimada ee Luis Muriel Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Alfredo Morelos Sheeko Carruurnimo Plus Xaqiiqooyin Taariikh Nololeed ee Untold
Carlos Bacca Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Juan Cuadrado Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Radamel Falcao Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
James Rodriguez Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta looyaqaano
Taariikhda wax laga beddelay: Juun 28, 2020
Taariikhda wax laga beddelay: Juun 20, 2020
Taariikhda wax laga beddelay: Juun 15, 2020